बालुवाटारमा रचिएको आपराधिक 'एपिसोड'
केपी ढुंगाना बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, २०:३०
समाजवादी पार्टीका सांसद डा सुरेन्द्र यादव 'अपहरण' प्रकरणमा जोडिएका नेकपाका २ सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबीच अहिले 'अपहरण' को फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। कतिखेर गएको? को-को गएको? कहाँ हाँसको साँधेको मासु खाएको? अनि कहाँ मिष्ठान्न भोजन गरेको? उनीहरुका यी सबै फेहरिस्त कम रमितादायक छैन।
उनीहरूका वृत्तान्त पढ्दा यस्तो देखियो कि रातारात महोत्तरी पुगेर डा यादवलाई गाडीमा कोचेर बालुवाटारको सेल्टरमा प्रवेश गराएर ठूलो युद्ध जितेर आएका थिए। यी तीनै जनाले डा यादव काठमाडौं आउन चाहेको तर लकडाउनका कारण आउन नसकेकाले 'रेस्क्यू' गर्न गएको दाबी गरिरहेका छन्। समाजवादी पार्टीका नेताहरूका अनुसार यो 'अपहरण' हो। अपहरणको नियत पार्टी विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्येय।
पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत रहेका डा यादवले चाहेको भए उनलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं आउन सवारीसाधन र दुई सत्ताधारी सांसदको साथ अनिवार्य पक्कै थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर उनी सहजै काठमाडौं अवतरण हुन सक्थे। उनको सुरक्षामा प्रहरी संगठनले बहालवाला प्रहरी नै खटाएकाले पिएसओको काम गर्न हतियारबिहीन नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक पक्कै चाहिने थिएन।
करिब २ वर्ष कस्ता व्यक्तिको हातमा देशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी पुगेको रहेछभन्ने बुझ्न डा यादव प्रकरण नै काफी भइदियो।
संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकताका लागि काठमाडौंमा बैठक बसिरहेको बेला लकडाउनमा डा यादवसँग भेट नहुँदा नियास्रो मेट्न मात्रै सत्ताधारी नेकपाका दुई सांसद र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हुर्रिएर नपुगेको घटनाक्रमले प्रस्ट्याइसकेको छ।
दल फुटाउन पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसद्‍मा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउँदै दुवैमध्ये एकातिर मात्र ४० प्रतिशत पुगे हुने खुकुलो कानुन अध्यादेशबाट ल्याएसँगै सुरु भएको खेलको नियत समाजवादी पार्टीलाई छिन्नभिन्न बनाउने रणनीतिको एक पाटो थियो।
बुधबार मध्यरातसम्म मधेश केन्द्रित २ दलभित्र जे-जस्ता घटनाक्रम विकास भए र त्यसमा सत्ताधारी दलका नेतृत्वतहले जे-जति चलखेल गरे, त्यसले काठमाडौंदेखि महोत्तरीसम्मको नेकपाका २ साँसद र पूर्व प्रहरी प्रमुखको यात्रा आपराधिक राजनीतिक अभ्यासको घृणित एपिसोड थियो भन्नेमा शंका रहेन।
नेकपाका सांसद् श्रेष्ठ त्यति परिचित होइनन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर चर्चामा आएका उनको नाम यस अगाडि राजनीतिक संरक्षणमा भएका आपराधिक, घृणित र कुत्सित गतिविधिमा सुनिएको पनि थिएन। त्यो अभाव उनले डा यादव प्रकरणबाट पूरा गरेका छन्।
यस्ता काम महेश बस्नेतका लागि भने नौला होइनन्। तत्कालीन नेकपा (एमाले)को युवा जत्था युथफोर्सको कमान्ड सम्हालेपछि उनले यस्ता प्रकृतिका घटनामा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका थिए नै। उनका क्षमता देखाउने घटनाक्रमका 'अर्काइभ' अझै हराइसकेका छैनन्।
नेकपासँग कुनै सांगठनिक सम्बन्ध नखुलेका र ३० वर्ष कानुन परिपालनामा खटिएर हालसालै प्रहरी महानिरीक्षकको ओहदाबाट अवकास पाएका व्यक्ति एकाएक घृणित राजनीतिक खेलमा समावेश हुनु छक्कै पार्ने दृष्य हो।
ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुख बस्ने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई अपराधको केन्द्रबिन्दू प्रमाणित गरिदिए।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालले अवकास पाएको कति नै भयो र? त्यही २ महिना हाराहारी। उनी ७५ हजार जनशक्ति भएको प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट बाहिरिएका राज्यका सम्मानित व्यक्तित्व हुन्। २ महिना अगाडिसम्म यिनको काँधमा आम नागरिकलाई अपराधीबाट सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी थियो। तर अवकाससँगै अर्केै रूपमा पो देेेखिए।
उनको कार्यकाल विवादित थियो नै। संगठनभित्र र बाहिर दुवैतिर उनी आलोचित थिए। उनको निर्णयशैली र क्षमता सधैं आलोचनाको विषय बन्यो। तर उनी 'राम्रो काम गरिरहे पनि घेराबन्दीमा पारेर बदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरिरहन्थे। डा यादव प्रकरणमा संलग्न भएर उनी आफैंले आफ्नो क्षमता, पदीय मर्यादाप्रतिको सचेतना र के गर्न हुने,के नहुने भन्ने निर्णय क्षमता प्रस्ट्याइदिए।
नेपालमा सत्ता स्वार्थमा सांसद खरिदबिक्री नौलो घटना होइन। सरकार ढाल्न र सरकार जोगाउन यहाँ सुरासुन्दरी र बैंकक काण्ड भइसकेका नै हुन्।
बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै, सरकार ढाल्ने या जोगाउने जोखिम नहुँदा पनि महामारीको चपेटामै अर्को दललाई टुक्र्याउन सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुखको उपयोग गरेर बहालवाला सांसदकै 'अपहरण'को घिनलाग्दो हर्कत् पनि नौलो नहुने बनायो बुधबारको घटनाले।
राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटकपटक खलनायक प्रमाणित भइरहेका छन्। समाजमा अहिले पनि यदाकदा सुनिन्छ जिम्मेवारीले मान्छेलाई इमान्दार बनाउँछ। तर विडम्बना यो कथन प्रधानमन्त्री ओलीका हकमा लागू हुने गरी बनाइएकै होइन रहेछ। अर्को दलको सांसदलाई बलजफ्ती उठाएर ल्याउने कुकर्मको डिजाइन बालुवाटारमा भयो। ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुख बस्ने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई 'अपराध'को सेल्टर बनाइदिए।
सम्झदा नि चित्त कटक्क खाने सत्य यही हो।